သီချင်းချစ်သူတွေရဲ့ ထူးခြားလှပတဲ့ အိပ်မက်လေးတွေထဲက စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေကို အချင်းချင်း မျှဝေဖလှယ်လို့ရတဲ့ နေရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက် လေးတွေကို ကိုယ်ဘယ်လို ခံစားမိသလဲဆိုတာကို ပွင့်လင်းစွာခံစားပြီး ရေးသားနိုင်ပါတယ်။
အိပ်မက်ချစ်သူများအတွက် အခုမက်ရမယ့် အိပ်မက်ကလေးကတော့
“ အအေးမှတ် သုညအောက် လျော့နည်းနေတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ သင်နဲ့သင့်ချစ်သူအတွက် အနွေးထည်တစ်ထည်ပဲ ရမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ”
ညီမတော့ မ၀တ်ဘူး သူ့ကိုဘဲ ၀တ်ခိုင်းမယ်။ သူကပြန်ပေးဝတ်ရင်တောင် ပြန်ငြင်းမှာပါဘဲ။ သူများတွေကိုဘဲ ဦးစားပေးချင်တယ်။
Post By : ချစ်ခွန်းညံ
အနွေးထည်မရှိတာထက်စာရင် တစ်ထည်ထဲ ရှိတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်ရင်ခွင်ထဲမှာ တစ်ယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားမယ်လေ အနွေးထည်ကိုတော့ အပေါ်ကနေ ခြုံထားလိုက်မယ် (စိတ်ကူးတွေပေါ့ :P)
Post By : ဟန်နီ
အနွေးထည်ကို နှစ်ယောက်လုံးခြုံ ထား ပြီး သူ့ကို ဖက်ထား မှာပေါ့
Post By : Sweet
သူနဲ့ချစ်တုန်းကတည်း သူ့အနွေးထည်ကို ကျွှန်မကို ပေးဝတ်ပေမယ့်... ကျွှန်မသူ့ကိုပဲပေးဝတ်ပြီး ကျွှန်မလည်း သူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ စိတ်ရောလူရောနွေးထွေးခဲ့ရတာလေ...
Post By : ဆု
အအေးမှတ်မှာဆို၇င် အနွေးထည်တောင် ၀တ်စရာ မလိုဘူး။ တစ်ခါတည်းသွေးခဲပြီး သေမှာ။
Post By : ပန်းမြတ်သူ
တစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပဲ ၀တ်လိုက်တော့မယ် ။
Post By : မိုးချစ်သူ22
the question is not possible. but this is real, i give it to him .
Post By : myatwon
ချစ်သူဆိုတာ.................. မျှတမှုရှိတယ်.......... ဒီလို မမေးပါနဲ့နော် တစိမ်းဆန်တယ် နော် ခြားနားခြင်း ကို မမေးပါနဲ့ မရေးပါနဲ့
Post By : ပုံ............ရှိန်းကိုဇင်
အချစ်ဆိုတာ...... မျှတမှုရှိတယ်..... နော်....... တစိမ်းဆန်တဲ့စကားတွေမမေးပါနဲ့..... မရေးပါနဲ့
Post By : ရှိန်းကိုဇင်
လူဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သူတွေလေ... တကယ်လိုများခင်ဗျားပြောတယ်နေရာသာတကယ်ရောက်မယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ပြီး နွေးထွေးမှုတွေကိုအတူတကွ ရယူလိုက်မယ်လေ .......... အချစ်ကမျှဝေခံစားမှုတွေဘဲ တစ်ဦးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းပေးတာချစ်လို့ပါ............
Post By : lwenwai (ခ)ကိုသက်
Post By : အပြုံးမျက်ရည်
ကျုပ်တို့ ဒေသက နွေးတယ်ဗျ။
Post By : အမြဲခွင့် လွှတ်သူ
အအေးမှတ်သုည ရှိတဲ့ နေရာကိုအရင်သွားကြည့်ဦးမယ်နော်....ပြီးမှပဲ ဘာလုပ်ရမလဲ...ဆုံးဖြတ်တာပေါ့...။
Post By : bon
We will wear together.
Post By : Kz
ပထမတော့ သူ့ကိုပေးဝတ်ဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်မရှိတော့ရင် နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ကျန်ရှိနေတဲ့ဘ၀မှာနေပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့တစ်ယောက်တစ်ဝက်ဝတ်ထားကြမယ်။
Post By : မင်းပိုင်မြတ်သူ
Post By : အောင်လေး
သူ့ ကိုအရင်မေးကြည့် မယ် ကိုဝတ်ခိုင်းရင်တောင်သူကတယောက်ထဲဆိုဝတ်မှာမဟုတ်ဘူး ကို့ ချစ်သူကတကိုယ်ကောင်းမဆန်တတ်တဲ့ သူလေ
Post By : ဖြိုး
နှစ်ယောက်လုံးသေမှာပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဝတ်ပါကိုယ်ဝတ်ပါဖြစ်နေလို့လေ
Post By : ကြွေခက်ဝေ
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ၀တ်ပြီးကောင်မလေး ကို ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ထည့်ထားမိ မှာတော့ အမှန် ပါပဲ ခင်ဗျာ..............ဒါဆို ကိုယ်လည်း နွေး သူလည်း နွေးနေမယ်လေ.. ဟုတ်တယ်မလား .
Post By : ထက်အောင်ကျော်.new.love92@gmail.com
Post By : နန်းနွယ်
ပေးဆပ်တာပ်ုကောင်းတယ်လို့ခံယူထားတော့ပေးဝတ်လိုက်မ.်။ဒါပေ့မယ့် ပေးစရာလူမရှိတော့ ခက်တယ်နော်
Post By :ုKT
ကျမ အတွက် အနွေး ထည်က သူ ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ ..။အဲတော့ ရလာတဲ့ အနွေး ထည် တစ်ထည် ကတော့ သူ အတွက်ပေါ့ ရှင်
Post By : မိုး ချစ်သူ22
Post By : windy
အေးအတူပူအမျှပေါ့ ကျွှန်တော့်၇င်ထဲကအတိုင်းဆို၇င်လေ.......။ဲ
Post By : stonebreaker
ကောင်မလေး ဆိုတဲကလေးမ ပြောထားတာမှန်တယ် သူ.ကိုပဲပေးဝတ်ထားလိုက်မယ်။ ကိုယ်ကတော.သူ.ရင်ခွင်ထဲမှာပဲနေလိုက်မယ်။ချစ်သူရင်ခွင်ထက်ဘယ်အရာကမှ မနွေးနိုင်ပါဘူး။
Post By : လူကလေးဟိန်း
It is not possible. But If the condition is real, I open the heater.
Post By : K.P.Z.Z.M
Post By : nay la
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယိအချစ်ဆုံးတဲ့ ကိုယ်ပဲ ၀တ်ထားမယ်
Post By : dream creator
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူအတွက် ဒီလောက်အေးတဲ့ နေရာမှာ အနွေးထည်တစ်ထည်ပဲရမယ်ဆိုရင် သူဝတ်တဲ့အနွေးထည်လေးဟာ ကျွန်တော်ဖြစ်နေမှ ပါ.....................။
Post By : ဇွဲဆုပိုင် emopunklay09@gmail.com
Post By : သူ့လွမ်း
ကျွန်တော်သူ.ကိုချစ်တယ်....သူလည်းကျွန်တော့်ကိုချစ်မှာပဲအဲဒီတော့.... ဘယ်သူမှမ၀တ်ဘူး...အတူတူအသေခံကြတာပေါ့....ချစ်တာပဲ...
Post By : SMART
thu ko pae wout khin mae.ayar arr lone thu atwat pae phit ya mae.
Post By : Insect09@gmail.com
တို.ကတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေပြီပဲ တစ်ထည်ထဲရတာကံကောင်းပါတယ် ဘယ်သူမှခွဲပေးစရာမလိုဘူးလေ ကိုယ်ဘာသာကိုဝတ်မှာပေါ့နော် ထားခဲ့ရက်သူနဲ.အတူတူရှိနေရင်တောင်သူကိုပေးမဝတ်နိူင်ပါဘူးနော် ကိုယ်ဘာသာကိုဝတ်မှာပေါ့ ကိုယ်အသက်ကိုရှင်အောင်လုပ်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မှာပေါ့
Post By : အသည်းကွဲပြီးနောက်မချစ်တက်သောမိန်းကလေး
မမအိမ့်ချစ်ကအအေးခံလို.မရဘူး အဲဒါကြောင့်မမအိမ့်ချစ်ကိုပေးဝတ်ပြီးကျွန်တော်ကမမအိမ့်ချစ်ကိုဖတ်ထားလိုက်မယ် မမအိမ့်ချစ်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာထားပြီးသေရရင်တောင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ် မမအိမ့်ချစ်အရမ်းချစ်တယ်
Post By : ကောင်းကင်ထက်
သူ့ကိုပေး ၀တ်လိုက်မယ်----ကျွန်တော်ကboy ပဲ
Post By : joker
ဟာ အနွေး ထည်တစ်ထဲတည်း ရှိတယ် ဆိုတော့ အ၀တ်အစားတွေ ရော မရှိ တော့ ဘူးလား...အဲလို မျိုးဆို ရင်တော့ အနွေးထည်တောင်မလို တော့ ဘူးဗျ....ဟားဟား...ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သိပါတယ်နော်....ဟား..နောက်တာပါ ဗျာ..သူ့ကို ဖက်ထား ပြီး ကိုယ်ဝတ်ထားမှာ ပေါ့ ဗျာ...ဟား...
Post By : လူပျိုလေး ..onlineking2009 ဆက်သွယ်ပေး လိုက်ပါ...ခင်မင်ခွင့် ရတာပေါ့.နော်..
ုသူကိုငါရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားမယ် အအေးဓါတ်ကို ငါပဲခံစားမယ် ငါရင်ခွင်ငွေ့ နဲ့ သူနွေးထွေးမှာပါ
Post By : နွယ်
အဲဒီအနွေးထည်ကိုနှစ်ယောက်အတူတူခြုံပြီးသေမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေမှာပေါ့ ဘေးနားမှာသူရှိနေပြီပဲ အတူတူရင်ခုန်သံတွေနဲ့ဘ၀ကို အဆုံးသက်မှာပေါ့ မဟုက်ဘူးလား
Post By : စိုးဝေအောင်
Post By : mmm
အနွေးထည်တထည်နဲ့တော့ နှစ်ယောက်စလုံးအသုံးမ၀င်ဘူး။ အဲဒီအနွေးထည်ကို ဟိုးအဝေးဆုံးလွတ်ပစ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားမယ်။ သေတော့လည်းအတူတူပေါ့။
Post By : ဘ၀သူရဲကောင်း
we will die together or we will wear one part each other
Post By : icesu
ိုနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး နွေးလာအောင် တစ်ခုခုလုပ်ရမှာပေါ့နော်.........
Post By : zarni lwin
ဒါကတော့သူ့ ကြည့်ရဦးမှာပေါ့ သေချာတာကတော့ နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော်တော့ချမ်းနေမှာပေါ့နော် ဟီဟီ ပျော်စရာကြီး
Post By : ပိုးဥ
Post By : မိုးကောင်းကင်လေး
အနွေးထည်လာမပေးလည်း ဒို.2ယောက်မှာရှိသားပဲ ၊ ဘာပဲဖြစ်တစ်ထည်တည်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ယူထားပြီး ခေါင်းမှာခြုံထားမှာပေါ့လို. မေးခွန်းမှာက အရင်က အနွေးထည်ဝတ်မလာရဘူးလို. မပါဘူးလေနော်။
Post By : နှင်းချစ်သူ
သူ့ကိုအနွေးထည်ဝတ်ခိုင်းပြီး ကျနော်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါမယ် ဥပမာ push up လုပ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့ အဟီး
Post By : ပန်းနုရောင်
Post By : ak
Post By : သူထူးကျော်
Post By : zaung htet
if it is enough big for us to wear together ,i will love each one more than before.
Post By : pusi
တခုခုတော.လုပ်ရလိမ်.မယ် အဲလောက်အေးနေရင်တော.သေချာတာရေခဲတုံးတော.ဖြစ်ခါနီးပဲနဲ.တူတယ် ပြီးတော.အဲဒီလောက်အေးနေတာဘယ်လိုလုပ်အနွေးထည်တစ်ထည်ကအသုံးဝင်မှာလဲနော်
Post By : ၀ိုင်
အဲ့ဒါ ရာသီဥတုက လှော်ပေးနေတာဟ...........အပီပဲ.....
Post By : ကိုနောင်
ကိုယ် မသေဖို့က အရေးကြီးတယ်
Post By : လင်းနေ
လွှင့်ပစ်လိုက်မယ် ပြီးရင်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ထားမယ် အဲဒါအနွေးဆုံးဘဲ
Post By : မျှော်စင်
သူ့ကိုပဲနွေးစေချင်တယ် ကိုယ်ကတော့ သူ့ကိုဖက်တာပေါ့
Post By : ဂျူး
Post By : လှလှဝင်း
ကိုကြီးကစစ်ဆရာဝန်ဆိုတော့သူ့ကိုအချမ်းပြေအောင် army rum အ၀တိုက်ထားလိုက်ပြီးအနွးထည်ကိုတော့ကျွန်တော်ပဲဝတ်ထားလိုက်တော့မယ်
Post By : ဇီဇာဇာဇပ်
ကိုကို့ ကို ပဲဝတ်ခိုင်းမယ်။ကိုကို့ ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဝင်နေလိုက်မှာပေါ့်ချွေးတောင်ပြန်လာဦမယ်။ဟုတ်တယ်မလားကိုကို...........။ ကိုကို မဖတ်ထားလဲသမီးပဲဖတ်ထားမယ်နော်။
Post By : cherry.lay8@gmail.com နန်းချယ်ရီ
နောက်ပေးမည့် အနွေးထည်ကို သူကိုပေးပြီးတော့ အရင် က အနွေးထည်ကို ကျွှန်တော် ဝတ်လိုက်မယ်လေ။
Post By : ကိုစော
Post By : တိမ်ပြာ
i wear htar mal. p yin thu ko phat htar mal.ok!
Post By : sumyatsandy
်we never go there
Post By : သော်တာ
သူ.ကိုပဲပေးဝတ်ထားလိုက်မယ်။ ကိုယ်ကတော.သူ.ရင်ခွင်ထဲမှာပဲနေလိုက်မယ်။ချစ်သူရင်ခွင်ထက်ဘယ်အရာကမှ မနွေးနိုင်ပါဘူး။
Post By : ကောင်မလေး
Post By : ဇေယျာဖြိုး
ko pat ko pal wort like amr pop .....:P
Post By : PUMA
Post By : su htat
သူ့ကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာပဲ ကောင်းလိမ့်မယ် ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် အဖြေပါ တစ်ခါတည်း ရတာပေါ့ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်မချစ်ပါ သိရတာပေါ့
Post By : gipsy4k
I will wear because I want to keep her warm
Post By : tripleK
မိန်းကလေးတွေ ရေးထားတဲ့ သူ့ကိုပဲ ၀တ်ခိုင်းထားပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ နေမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ကြက်သီးမွေးညင်းတွေတောင် ထနေမိတယ် အဲဒီအထဲက တစ်ယောက်သာ ဖြစ်လိုက်ချင်တော့တယ်
Post By : ဂျောင်မင်း
Post By : Ngu Wah
နှစ်ယောက်အတူတူ မျှဝေခံစားရမှာပေါ့ တစ်ယောက်ယောက်က အနစ်နာခံပေးခံပေးခဲ့ရင်တောင် အားနားမှုက အချစ်ကို မှေးမှိန်သွားစေမှာပေါ့
Post By : ကိုတင်
chit thu ko pay wear chin tal. i ka die yin die par say.
Post By : myomin
Post By : မချစ်တတ်သူ
ကို့ ကိုဝတ်ခိုင်းပြိး ကို့ ရင်ခွင်ထဲမှာ နေမှာပေါ့
Post By : ကို့ ကိုချစ်တဲ့ကလေး
ကျွန်တော်ကတော အနွေးထယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲ.ပြီ နှစ်ယောက်လုံးအနွေထယ်ထဲဝင်ပြီး ချစ်သူကိုအပ်ချည်နဲ.ချုပ်ခိုင်မယ် ဒါဆိုအဆင်ပြောပြီပေါ. .......
Post By : စိုင်းစိုင်း
Post By : သည်နွေညိမ်း
thu ko wat khaing may nouth thu yeah yih khon htay win nay may but thu ka ko ko 1 kay chit tar so yin tot i ko pay wat hmar par
Post By : whiterose
Post By : ကောင်မလေး၁ယောက်
ko har ko bae wear mal.
Post By : amy
thu ko pal pay wut like mal, pi yin thu ko phat htar like mal hee****
Post By : panchithwe
မော်တာက မိန်းကလေးလေ.. သူ့ကို ချစ်လို့ အစ်ကိုဝတ်ထားလို့ပြောရင်လည်း ... သူက.. ချစ်သူပဲ ၀တ်ထားပါဆိုပီး အတင်း ၀တ်ခိုင်းမှာ သေချာတယ်.. ဒါပေမဲ့... မော်တာက အထက်က မမတွေ ပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်မယ်.. အစ်ကိုဝတ်ထားပီး.. မော်တာ့ကို ဖက်ထားပါလို့.. ခစ်....ရှက်ရှက်...:)
Post By : မော်တာပါးစပ်
ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ချစ်သူကိူဘဲဝတ်ခိုင်းပြီးသူ့ကိုဖက်ထားမယ် ကိုယ်အေးချင်အေးပါစေ သူနွေးနေရင်ကိုယ်နွေးနေသလိုပါပဲ ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကိုယ်ဟာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ဝေးနေပါတယ် တကယ်လို့သာချစ်သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံဆည်းရမယ်ဆိုရင် အခုပြောတဲ့နေရာထက်အေးပြီးခဲနေတဲ့နေရာမှာအခုလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့လည်း မကြောက်ပါဘူး ချစ်သူနဲ့ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတာနဲ့တင်ကျေနပ်ပါပြီ.....
Post By : ကိုစစ်
i ka dop chit thu ko oo sar pay par dae.
Post By : ye lynn aung
လွယ်မလိုလိုနဲ့ အင်မတန်ကိုစဉ်းစားရခက်တဲ့အချက်ပဲ... ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုဦးစားပေးမှာပေါ့... ပြီးတော့ သူကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် လူ့ဘောင်စည်းကမ်းအရ ငဲ့ညှာရမဲ့အခြေအနေလဲရှိတယ်... သို့သော်လည်း သူ့အနေနဲ့ကလဲ ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့... ကိုပဲဝတ်ထားပါ...ဆိုပြီး ပြောလာလိမ့်ဦးမယ်လေ... တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဦးစားပေးရင်းနဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးအခြေအနေကတော့ တစ်ယောက်မှမ၀တ်ကြပဲနေဖြစ်မလား... တစ်ယောက်က၀တ်ပြီး ကိုယ်ငွေ့ရအောင် ဖက်ပေးထားမလား... ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုပဲ ၀တ်ပေးမိမှာပဲ... ဒါဟာ စိတ်ရင်းအမှန်ပဲ...
Post By : Cronos
ကိုကြီးက မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး နှလုံးသားကိုအသေသတ်သွားတာလေ
Post By : လရိပ်ချို
အနွေးထည်ကို ကိုဝတ်ပြီးတော့ သူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်မှာပေါ့...မိုက်တယ်နော်
Post By : ကျော်ဇေယျာ
l wish my honey wear.
Post By : san naing
်ိကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝတ်မယ် အတင်းတောင်းရင်သတ်ပြစ်လိုက်မယ် ဟင်း
Post By : koko
Titanic ကားကြည့်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား ??????? ချစ်သူကိုပဲပေးဝတ်လိုက် မှာပေါ့။ ပြီးတော့မှအင်း ........................တင်းတင်းလေးဖတ်ထားမှာပေါ့
Post By : JOY
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်လုံးဘေးမှာရှိနေမှာတော့ အနွေးထည်လိုသေးလို့ဗျာ . သူကို ဖက်ထားမှာပေါ့...
Post By : နောင်ဇာနည်ထွန်း
သူရောကိုယ်ပါ မ၀တ်ဘူး အေးအတူပူအမျှပေါ့ လက်မခံရင် go ပေါ့ (မဟုတ်ဘူးလား)
Post By : amazing
ချစ်သူကိုပဲ ၀တ်ပေးထားလိုက်မယ် ချစ်သူနွေးနေရင် ကျေနပ်တယ် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်လို့ ၀တ်ပေးထားမယ် ကိုယ်ကတော့ အေးချင်သလောက်အေးပါစေ။ ချစ်သူနဲ့ဆိုရင် ဘယ်အရာမှ မကြောက်ဘူး
Post By : kyawthiha
Post By : ယုန်လေး
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝတ်မယ်.................1 go2come :P
Post By : lamin
thu ko pale wite pyi topthu ko i yin kwin htay mhar pale htar mal i ka top thay yin laye thay pa say pop.
Post By : ZWEL
[mapyaw pya bul....lote sayar ka] ha ha.....chit thu ko pal pay wit mar pop.nga ka tot 'haven' ko pal 'doe' ya mar poe..[သေပြိပေါ.]
Post By : Thar Thar
thu ko wut khaing htar pyi ko ka thu yin khwin hte win nay mal lay.......
Post By : nyein
thu ko phat khaing htar mal......... :)
Post By : ချက်ကီ
တိူ့ကအေးတာကြိုက်တယ့့် 
Post By : SAILORMOON
တကယ်လက်တွေ့ မှာမကြုံဖူးသေးလို့မသိဘူး၊ တကယ်ကြုံလာမှပဲသိမှာပေါ့
Post By : Real Life
ကြုံလာရင် ခုဖတ်ခဲ့ရတဲ့ Commentတွေထဲ က အကောင်းဆုံးကိုစဉ်းစားရမယ် :P (Eg., Lady First)
Post By : piggybank
Post By : tuntunaung
အပိုတွေ ကိုယ်ဘာ ကို ပဲ ၀တ်မှာပေါ့ ဟဲ ဟဲ ချစ်ရမဲ့ သူမတွေ့သေးလို့
Post By : ထက်ကို
Post By : goodboy
အလယ်ကတခြမ်းခြမ်းပြီး တစ်ယောက်တစ်ဖက် ၀တ်ထားလိုက် မှာပေါ့လို့..ဟီး စတာ ရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီး အား...ဘွားပေးလိုက်မယ်လေ
Post By :ုကိုလူပျို
Post By : cupid
I am not sure what to do.But according to saying,Lady First in everything.AM i right?
Post By : sparrow
သူ့ ကို ပေးဝတ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တကယ်ချစ်တဲ့ သူ ဆို ရင် အသက်တောင်ပေးဖို့ဝန်မလေး ပါ ဘူး။သူဝတ်ထားတာလေးကိုပဲ ကြည့်နေရရင် နှလုံးသားက နွေးနေမှာပါ။
Post By : flowerstar
သူ့ကိုပေးဝတ်ခိုင်းမှာပေါ့.........သေချာတာတော့သူလည်းဝတ်မှာမဟုတ်ဘူး.... တစ်လှည်.စီဝတ်ရင်းနဲ. အအေးဒဏ်ကိုအံတုရမှာပေါ့
Post By : ဖူးလေး
thu ko pae oo sar pay mar par. because thu ko chit tar ko.i love kyawsawerlwin.
Post By : zarchi
အစ်ကိုသာဆိုရင်တော့ နှင်းကိုပဲဝတ်ခိုင်းမှာပါ သူကအရမ်းအနစ်နာခံ သည်းခံတတ်တယ်လေ
Post By : နှင်း
ကျွန်တော်အတွက်တော့...အနွေးထည်...တစ်ထည်..တည်နဲ့...အချမ်းမပြေဘူးထင်.. ပါတယ်..အဲဒါကြောင့်...ချစ်သူကိုဦးစားပေးပြန်တော့လည်...သူကကိုယ့်ကိုပြန်ပေး.. မယ်ထင်တယ်...အဲဒါကြောင့်နှစ်ဦး..လုံးသဘောတူ...ဘေးနာလေးမှာပဲ...ချထားမိ.. မှာသေချာပါတယ်...နှစ်ယောက်..လုံးရဲ့ရင်ထဲကိုတော့...ဘယ်လို..အေးစက်မူမျီုးမှ... ၀င်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး....နွေးထွေးမူအပြည့်နဲ့..ပဲ..ချစ်နေကြလို့ပါ..အပြန်အလှန် ပေါ့...
Post By : ရန်လင်း
နှစ်ယောက်တူတူခြုံထားမယ်လေ။ တကယ်ဆိုရင်အနွေးထည်ထက် ချစ်သူရဲ့ရင်ခွင်ကပိုနွေးတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။
Post By : ရည်
All my life , for him . so that problem is no problem.
Post By : NANDAR
Post By : no
တကယ်သာဆိုသူ့ကိုဘဲဦးစားပေးမိမှာပါ။ အမြဲတမ်းသူ့အတွက်ပဲ စဉ်းစားပေးနေမိလို့လေ။ သူကတော့သူ့ကောင်မလေးအတွက်ပဲ စဉ်းစားမယ်ထင်တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူပျော်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်စွန့်လွှတ်ရဲပါတယ်။
Post By : ချိုဇင်
ချစ်သူရဲ့ ရင်ခွင်ဆိုတာ အနွေးဆုံးသောအရာဘဲလေ ဘယ်လောက်ဘဲအေးအေး သူ့သာဖက်ထားရင် သုညဒီဂရီလောက်ကတော့ အသာလေးဘဲပေါ့ ဟီ ဟီ .... သိပြီလား ....
Post By : ချစ်သူမေ
သူ့ကိုဝတ်ခိုင်းပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲဝင်နေမှာပေါ့ ....
Post By : ywtlover
ကျွန်မသာဆိုရင်ချစ်သူကိုပဲဝတ်ခိုင်းမိမှာပါ။သူအချမ်းပြေပြီးအဆင်ပြေတာလေးကိုကြည့် ရင်းကိုပါနွေးလာသလိုခံစားရမှာမို့ပါ။ဒါပေမယ့်ကျွန်မချစ်သူကဒီအတိုင်းကြည့်နေရက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူမ၀တ်ပဲကျွန်မကိုဝတ်ခိုင်းမှာပေါ့လို့စဉ်းစားမိတယ်။
Post By : မိန်းကလေး
ကွန်ွတော့ချစ်သူကိုဖက်ထားပေးလိုက်မယ် အချမ်းပြေအောင် ဒီထက်ပိုတင်းတင်းလေးဖက်ထားလိုက်မယ် အင်္ကျီကိုတော့မီးလူံ့ပစ်လိုက်မယ်
Post By : မောင်မူးမူးမိုက်
Post By : လူလိမ်
Not enough the jacket. Togther die. bey bey. see you next life.
Post By : evemoekyi
ma die khinatu tu nay mar pop......
Post By : chan chan
သူ့ကိုပဲ ဦးစားပေးဝတ် ခိုင်းပြီး ကိုယ်က တော့ သူ့ကို ဖက်ထားမှာပေါ့...
Post By : warrior
ကျွန်တော်က အနွေးထည်ကို ၀တ်ပြီး သူ့ကို ဖက်ထားလိုက်မှာပေါ့။ နွေးသွားမှာပါ။
Post By : John Alada
တကယ်သာအဲ့လိုဆိုရင် ..... သူ့ကိုပဲဝတ်ခိုင်းမှာပေါ့ သူကအေးတာခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး အဲ့ဒီထက်ပိုနွေးစေချင်လို့ ရင်ခွင်ထဲဖက်ထားဖို့ ဆိုတာကတော့ စိတ်တောင်မကူးရဲဘူး
thu. ka wit khine p top..............i ka thu. yin khwin htal mhar nay mal..........
Post By : ma pyin pal hla tat nat tha mee
ဘာမှ မ၀တ်တော့ဘူး။ ဟဲ ဟဲ
Post By : ခိုင်လေး
သူကို ဖက်ထားလိုက်မယ် ။
Post By : ကျော်ကျော်
die pi pop....die hmar pop..
Post By : MOE
အအေးမှတ် သုည ဆို သေပြီပေါ့ ငတုံးရ။ နှစ်ထည်ဆို စဉ်းစားမယ်၊
Post By :ွGod of war
သူ့ကိုပေးဝတ်ထားပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲနေ နေ လိုက်မှာပါ့။
အဲဒီအကျီကိုရောင်းပြီးတော့အပေါစား2ထည်ဝယ်မှာပေါ့
Post By : ချိုမာ
ကျွန်တော်က ၀တ်ထားပြီး သူ့ကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်ထားလိုက်မယ်။ ဒါမှအချမ်းပိုပြေသွားမှာ
Post By : မြတ်သောမောင်
ဤ အိပ်မက်လေး နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခုပြောချင်ရင် Post Comment